China EV ibhetri itshaja 6.6KW kwibhodi itshaja ngokukhawuleza 30a 50a 60a 90a Ukwenziwa kunye nefektri | DCNE
Ishaja ye-EV ye-6.6KW kwibhodi yokutshaja ngokukhawuleza i-30a 50a 60a 90a
Ukufakwa kwetshaja yokubetha kwempazamo evaliweyo ngokupheleleyo kunokuseta inkqubo yonxibelelwano ye-CAN, qhagamshela nge-lithium yebhetri ye-BMS ithumela ulwazi lolawulo (umyalezo 1) kwibhetri kwisithuba esimiselweyo se-1s. Emva kokuba itshaja ifumene umyalezo, iya kusasaza useto ukusebenza
ngokusebenzisa ombane ezifumanekayo kunye yangoku. Ukuba akukho myalezo ufunyenwe kwisithuba semizuzwana emi-5, ingena kwimeko yempazamo yonxibelelwano kwaye icime iziphumo. Itshaja ithumela ulwazi losasazo (umyalezo 2) rhoqo kwi-1s, imitha yokubonisa inokubonisa imeko yetshaja ngokwe-informatio.
Igama Ishaja ye-EV ye-6.6KW kwibhodi yokutshaja ngokukhawuleza i-30a 50a 60a 90a
Umzekelo Inkcazo: DCNE-Q2-6.6kw
Ubungakanani 420 * 295 * 113mm
IP IP66Ukungena manzi, ukungabi nalo uthuli, ubungqina bokuqhushumba, ukothuka）
Imveliso amandla 6600W
Egqithileyo Kwitshaja zebhodi zisetyenziselwa iikholeji zeenqwelo zegalufa
Okulandelayo: Kwibhodi yeshaja 48v 72v 96v 144v itshaja yebhetri yebhetri kunye neshaja yebhetri